Tafaasiisha Raac Faahfaahinta badhanka iyo Customization
Jimco, Juun 3, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Twitter waa barta bulshada aan ugu jeclahay… Waan qirayaa. Waan jeclahay fudeydkiisa iyo sahlanaantiisa adeegsiga - iyo qiimaha cajiibka ah ee shabakadaydu i siiso markaan u baahdo caawimaad. Ku cusub dagaalada badhanka warbaahinta bulshada waa sii deynta badhanka raacitaanka Twitter. Si ka duwan xiriirkii hore ee kugu soo celin lahaa Twitter, badhankaani wuxuu u oggolaanayaa soo booqde kasta inuu saxeexo oo la socdo hal guji oo badhanka ah. Waxaan ku darnay garabkayaga halkan Martech.
Isticmaalaha la raaco (magaca_ magaca)
Raacayaasha waxay tirsanayaan bandhig (xog-show-count)
Midabka badhanka (badhanka xogta)
Midabka qoraalka (xog-qoraal-midab)
Midabka isku xidhka (xog-xiriiriye-midab)
Ballaaran (baaxadda xogta)
Iswaafajin (xog-isku toosin)
Haddii aadan ku qanacsaneyn inaad adigu sixiddo koodhka, Twitter wuxuu ku daray bog macluumaad oo aad ka habeyn karto bartaada 'Twitter Raac Button' oo aad si fudud u qabsan karto qoraalka si aad ugu dhigto bartaada. Haddii aad jeceshahay qoditaanka, Twitter wuxuu leeyahay bog horumarineed oo faahfaahsan oo loogu talagalay Badhanka Raac.
Hal qoraal - haddii aad rabto inaad liis garaysato akoonno badan oo Twitter ah oo aad raacdo, waad qori kartaa inta aad jeceshahay oo kaliya ku dar qoraalka qoraalka hal mar! Waxaan ku sameynay tan Buugga Blogging Corporate goobta.
Thanks for tip. Inbadan ayaa la mahadiyey